The teachings and life of Osho
The Ridiculous Teaching os Wrong Way Rajneesh
Dynamic meditation question
Why are arms raises in the Hoo stage? Why is it less ideal if the arms aren’t raised?
လူ့လောကမှာ အဓိပ္ပာယ် မရှိတာတွေနဲ့ အဆန်းဆန်းအပြားပြား ဖြစ်နေတယ်။
အိန္ဒိယမှာ ဇာတ်အနိမ့်အမြင့် ခွဲခြားထားတာမှာ စုဒြာတွေဟာ အသားချင်း မထိထိုက်အောင် နိမ့်ကျတဲ့ဇာတ်။ အတိအကျ ပြောရရင် ဇာတ်အနိမ့်အမြင့် ခွဲခြားသတ်မှတ်တဲ့ စာရင်းထဲတောင် မထည့်ခံရတဲ့ အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ စုဒြာတစ်ဦးက ခရစ်ယာန်ဝါဒီတစ်ဦးဖြစ်သွားရင်တော့ ခရစ်ယာန် အသိုင်းအ၀ိုင်းထဲမှာ သူ့ကို ခွဲခြားနှိမ်ချ ဆက်ဆံတာ မရှိတော့ဘူး။ တန်းတူဖြစ်သွားပြီ။
ဂျာဘဲပါမြို့မှာ တည်ရှိတဲ့ ထာဝရ ဘုရားသခင် အယူဝါဒဆိုင်ရာ ကောလိပ်အကြီးစားတစ်ခုရဲ့ ကျောင်းအုပ်ကြီး မက်မန်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ မိတ်ဆွေကောင်းတွေအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ ကျွန်တော်က သူ့ကို မေးခွန်းတစ်ခု မေးတယ်။
“ခရစ်ယာန်တွေက ဘာလို့ ဆင်းရဲသားတွေကိုပဲ စိတ်ဝင်စားရတာလဲ”
ကျွန်တော်က သူ့ရုံးခန်းထဲ ဆုံမိကြတုန်း မေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူက ပြောတယ်။ “ငါ့အိမ်ကို လာခဲ့ပါလား။ ငါ့အိမ်က ဒီကောလိပ် နောက်ဘက်မှာ ရှိတယ်။ ငါ့အိမ်ကို လာရင် မင်းကို ငါ ပြစရာရှိတယ်”
သူ့အိမ်ကို ကျွန်တော် အလည်အပတ် သွားလိုက်တယ်။ သူက အမျိုးသားတစ်ဦးနဲ့ အမျိုးသမီးတို့ပါတဲ့ ပုံတစ်ခုကို ပြတယ်။ ပုံက အတော်ဟောင်းနွမ်းနေတာမို့ သက်တမ်းကြာပြီဆိုတာ သိသာနေတယ်။
သူတို့နှစ်ယောက် ၀တ်စားထားတာ စုတ်ပြတ်သတ်နေတယ်။ ညစ်ညစ်ပတ်ပတ် ဖြစ်နေတယ်။ သူတို့ရဲ့ မျက်နှာကို ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ဆာလောင်နေတာကို ဖော်ပြနေတယ်။ သူတို့ရဲ့ ဘ၀တွေက ဒုက္ခအိုးထဲ ရောက်နေတယ်ဆိုတာ မြင်နေရတယ်။ သူတို့ဟာ သူတောင်းစားတွေ ဖြစ်မှာ သေချာတယ်။
ပါမောက္ခမက်မန်က ကျွန်တော့ကို မေးတယ်။
“သူတို့ကို ခင်ဗျား မှတ်မိလား။ ဘယ်သူတွေလဲ သိလား”
“ဘယ်လိုလုပ်ပြီး သိနိုင်မှာလဲ။ သူတို့ကို အပြင်မှာ တစ်ခါမှ ကျွန်တော် မမြင်ဖူးဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူတောင်းစားတွေ ဖြစ်ပုံရတယ်”
“ဟုတ်တယ်။ သူတို့က သူတောင်းစားတွေ။ သူက ငါ့အဖေ။ သူက ငါ့အမေ။ သူတို့က သူတောင်းစား ဖြစ်တာတင်မကသေးဘူး။ သူတို့က စုဒြာတွေ။ အသားချင်း မထိထိုက်သူတွေ။ သူတို့ အသက်အတော်ကြီးတော့မှ ခရစ်ယာန် ဖြစ်သွားကြတယ်။ ခရစ်ယာန် အဖြစ်ခံလိုက်ကြတယ်လို့ ပြောရင် ပိုမှန်မယ်။ သူတို့က အတော်အိုမင်းနေကြပြီ။ တောင်းစားဖို့ အိုမင်းမစွမ်းဖြစ်နေကြပြီ။ ပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ ကလေးတွေ နောင်ရေးကို သူတို့ ပူပန်ကြတယ်။ အထူးသဖြင့် သူတို့ရဲ့ သားကလေးအတွက် ပူပန်တယ်။ သူက အခု ကျောင်းအုပ်ကြီး မက်မန်ဆိုတဲ့ ငါပဲ”
သူတို့ သေသွားတဲ့အခါ ချာတိတ်ကလေးက ဘယ်လိုတွေ ဖြစ်ကုန်မလဲ။ သူတို့လိုပဲ သူတောင်းစားတစ်ယောက် ဖြစ်သွားဖို့ သေချာသလောက် ရှိတယ်။ သူတို့ လင်မယား ဇရာထောင်းလို့ မမာမကျန်း ဖြစ်တော့ ခရစ်ယာန်ဆေးရုံတစ်ခုမှာ သွားပြတယ်။
တခြားဘယ်ဆေးရုံကမှ သူတို့ကို လက်မခံကြဘူး။ ဆင်းရဲသား လက်မခံဘူး။ သူတောင်းစားဆိုရင် ဝေးရောပဲ။ အခမဲ့ ကုသမှု၊ အခမဲ့ ဆေးဝါး၊ အခမဲ့ အစားအစာ၊ အခမဲ့ ဆရာဝန်တွေ၊ အခမဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေ မရနိုင်ပါဘူး။ ခရစ်ယာန် ဆေးရုံမှာတော့ အဲဒါတွေ အကုန်လုံး ရနိုင်တယ်။ ဒီတော့ ခရစ်ယာန်ဆေးရုံမှာ တက်ရောက်ကုသလိုက်ကြတယ်။
အဲဒီဆေးရုံမှာ သုံးစွဲတဲ့ နည်းလမ်းက ဆေးချည်း မပေးဘူး။ သမ္မာကျမ်းစာနဲ့ တွဲပြီး ပေးတယ်။ ဘုန်းတော်ကြီး နေ့တိုင်းလာတယ်။ သမ္မာကျမ်းစာကို နည်းနည်းချင်း သွန်သင်ပေးတယ်။ သောက်ဆေးပေးရင်လည်း သမ္မာကျမ်းစာထဲမှာ ဖော်ပြထားတာတွေကို နည်းနည်းပါးပါး ရွတ်ဆိုရတယ်။ ဆေးထိုးရင်လည်း ရွတ်ဆိုရတယ်။ ဆရာဝန်လာကြည့်လည်း ရွတ်ဆိုတယ်။ သူနာပြုလာလည်း ရွတ်ဆိုတယ်။
ဘုန်းတော်ကြီးက သူတို့ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ဂရုတစိုက်ဖြင့် မေးမြန်းတယ်။ ပြောပြတာကို စိတ်ဝင်တစား နားထောင်ပေးတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ ဘ၀တစ်လျှောက်မှာ လူလူသူသူ ဆက်ဆံခံရတာ အခုအကြိမ်ဟာ ပထမဆုံး အကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်သက်လုံး သူတို့ကို ခွေးလေခွေးလွင့်တွေလိုပဲ ဆက်ဆံခံခဲ့ရတယ်။ လူလို ဆက်ဆံခံရဖူးတာ မရှိခဲ့ဘူး။
ဟိန္ဒူအဖြစ်နဲ့ သူတို့နှစ်ဦး ဆက်နေမယ်ဆိုရင် လမ်းထောင့်မှာ ခွေးလိုပဲ သေကြရလိမ့်မယ်။ အဲဒါ အိန္ဒိယမှာ တကယ့်အဖြစ်မှန်တွေပါပဲ။
ပါမောက္ခမက်မန်းက ကျွန်တော့ကို ပြောပြတယ်။
“အဲဒါ ငါ့အဖေနဲ့ အမေ။ သူတို့ ခွေးတွေလို သေကြရလိမ့်မယ်။ မြူနီစပယ် အမှိုက်သိမ်းတဲ့ ထရပ်ကားက သူတို့ အလောင်းတွေကို အမှိုက်သိမ်းရင် သိမ်းသွားမယ်။ မြို့ပြင်က အမှိုက်ပုံကြီးမှာ အမှိုက်တွေနဲ့အတူ ပစ်လိုက်မယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတောင်းစား စုဒြာကို မီးသဂြိုဟ်ပေးရိုး ထုံးစံ မရှိဘူး။ ဘယ်သူကမှ အရေးမလုပ်ဘူး။ လူလို့မှ တန်းတူ မသတ်မှတ်တာ”
သူက နောက်ထပ် ပုံတစ်ပုံ ပြတယ်။ သူ့သမီးနဲ့ သမက်တို့ရဲ့ပုံ။
ကျွန်တော် မျိုးဆက် ၃ ဆက်ကို မြင်ရတယ်။
သူ့အဖေအမေ၊ လူအဖြစ် သတ်မှတ်မခံရဘဲ ခွဲခြားနှိမ်ချခံထားရသူတွေ။ တောင်းရမ်းစားသောက်နေထိုင်ကြရသူတွေ။
ပါမောက္ခမက်မန်၊ ဂုဏ်အဆင့်အတန်း ရထားသူ၊ လူအများ လေးစားရတဲ့ ရာထူးဂုဏ်သိမ် ရထားသူ။ လစာ မြင့်မားတဲ့သူ။ ဇာတ်အမြင့်ဆုံးဟိန္ဒူဖြစ်တဲ့ ဘရာမင် (ဗြဟ္မဏ)တွေက သူနဲ့ အသားချင်း ထိတာ အသာထား။ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေကြပြီ။ ပါမောက္ခကြီး မက်မန်းဟာ စုဒြာ သူတောင်းစားနှစ်ဦးရဲ့ သားဆိုတာ မသိကြဘူး။
နောက်ထပ် မျိုးဆက်တစ်ခုက သူ့သမီး။ အဲဒီသမီးကို ကျွန်တော် မြင်ဖူးတယ်။ သူက အမေရိကန်တစ်ယောက်နဲ့ လက်ထပ်တယ်။
မျိုးဆက် ၃ ခုကို ကြည့်လိုက်တော့ အဲဒီလို အပြောင်းအလဲကို တွေ့ရတယ်။ အဲဒီသမီးက သူ့အဖွားနဲ့ ဘာမှ မဆိုင်တော့ဘူး။ သူ့ခင်ပွန်းကလည်း သူ့အဖိုးနဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ဘူး။ သူတို့တတွေအကြား ဆက်သွယ်ပေးထားတဲ့ တံတား မရှိဘူး။
အဲဒီသားမက်က လူသိများတဲ့ တက္ကသိုလ်ပညာတတ် ပါမောက္ခ။ အိန္ဒိယမှာ ၆ လ စာလာသင်ပေးတယ်။ ကျန်တဲ့ ၆ လကို အမေရိကမှာ စာသင်ပေးတယ်။
မက်မန်ရဲ့ သမီး ဆာဂျိုကလည်း ပါမောက္ခပဲ။ မက်မန်ရဲ့ သားတစ်ယောက်က ကျောင်းအုပ်။ သူတို့ မိသားစုက ပညာကောင်းကောင်းတတ်တဲ့သူတွေချည်းပဲ။ သူတောင်းစားနှစ်ဦး ခရစ်ယာန်ဖြစ်သွားတာကြောင့် သူတို့တတွေအားလုံး ကောင်းစားသွားကြတယ်။ ဒီတော့ သူတောင်းစားနှစ်ဦး ဘာသာခြားထဲကို ၀င်လိုက်တာ ကျွန်တော် ကန့်ကွက်ငြင်းခုံဖို့ မလိုဘူး။ ခရစ်ယာန်တွေက ဘာလို့ ဆင်းရဲသားတွေကို စိတ်ဝင်စားရတာလဲလို့ ကျွန်တော် မမေးတော့ဘူး။ ဆင်းရဲသားတွေကသာ ခရစ်ယာန်ကို စိတ်ဝင်စားကြရတာ ဖြစ်နေတယ်။
မက်မန်းကို ကျွန်တော် ပြောလိုက်တယ်။
“ခင်ဗျားရဲ့ အဖေနဲ့ အမေတို့ လုပ်တာ အတော်မှန်ကန်တယ်”
Are there any books/essays written by Osho about persuasion?
...or transcripts about how to persuade?
osho spoke on....
osho spoke about nietzsche,bertrand russel.and other great philsophers.but i would of loved to hear his opinion on nikola tesla!
It's there any community like rajneeshpuram? I'm fascinated with their way of living
At what point in his life did Osho start speaking like the stereotype ofa"sage", dragging his sentences out very slowly?
I just find italittle odd that someone would start speaking like this after acquiring some admirers. Is there any footage of him just speaking normally? I mean, he wasauniversity student and professor, I wouldn't think he conducted all interpersonal communication by staring fiercely in one direction and letting the words slowly bubble out whilst making snake noises. But hey, maybe that's just the way he speaks.
Most of Osho's Books For Free (40k page pdf) When You Sign Up To This Newsletter
The Alpha Is The Omega - Everything Is God - Osho
Highly recommended e-book: Intimacy by Osho
So um.... what is this? Is it for me? Should I look into this? Why? And where to begin?
Just watched Wild Wild Country. I was stunned and ashamed (not for the first time) of the bigotry of our nation. A nation who's ancestors fled and then fought against the very kind of persecution they inflicted on this man and his people. Though she could have handled it inamuch kinder way, (obviously) I don't fully blame Sheela for fighting back the way she did. The local population and the government was unfairly shoving them out just because they didn't like their way of living. They came in, paid fair and square for the land that no one gaveashit about, and then where attacked simply for their beliefs. Well of course they fought back. I would too.
But I was also stunned how many people seemed to truly love and adore this man, and also how wonderful they claimed their lives where living under his roof and his teachings. The one thing I didn't get out of it is, "why?". Which, I have to say left me rather intrigued. Like anyone else, I like being happy, and I've never seenamore massive group of happy people living together in harmony than I did in this documentary. And I've readafew interviews of people that went through that experience, young and old, said it was the most happy joyous time of their lives. Not at all the kind of postmortem responses you see from typical cult survivors. So I'm thinking maybe I'd like to getataste of that pie.
Is thisareligion or suedo-religion? Is this reallyacult? (although I pretty much consider all religionacult anyway so I guess that's redundant) I'm atheist and not too fond of religions. Even the best intention-ed ones tend to get easily corrupted for power and greed, as seemed to already be the case here with Sheela and then maybe even currently? I'm also notafan of hippy jibby soul talk. I don't believe in the soul or anything spiritual really. I don't believe life hasapurpose or that any greater meaning or any of that "magic" exists. I think life just "is" and you can make of life whatever you choose to.
Also is thereabetter subreddit to ask this in than this one? Seems pretty dead around here.
WHY DO YOU RESPECT THIS CRIMINAL???
OSHO is - was - the Bhagwan Shree Rajneesh. He directed his followers to poison 700 people, he delivered his 'sermons' (he wasanotorious plagiarizer) at gunpoint, and he took the money his followers gave him and boughtafleet of Rolls Royce cars.
Somebody explain how this scumbag can be consideredamoral person, let alonea'holy man'.
Why does it come across that Osho wasn’t apposed to material wealth?
I just watched the documentary on Netflix (I’m assumingalot of the people here ended up here because of the documentary). And I haven’t read any of his works but I’m very interested to. Though what I find odd is that it’s no secret that he had lots of wealth and wasn’t afraid to display it openly. His cars, his jewelry... I don’t claim to beaBuddhist but I have readafew books and the Buddha made it crystal clear that material possessions won’t bring you happiness.
But then, does material possessions themselves rob you of your happiness or is it you clinging to those material possessions that’s the problem. With that mindset you can attain wealth, display it, as long as you don’t get attached to it. Having the temptation constantly around you seemsabit risky though. I still think it’s weird.
Books on pune ashram
Does anyone know any about it in the 70s
I'm curious as to why Osho appeals, rather than the innumerable other teachers (none of whom have ever been even adjacent toabiowarfare attack). Why do you like him rather than, say, Ram Dass, who basically has the same schtick?
How can you still be so blind and follow the teachings of an ego-manic, materialistic narcacist? A terrorist,arapist, and on top of thatamurderer. Explain yourselves.
30 Hours of Osho Talks on Spotify
Seeking followers of Osho from Tampa, Florida. Are you out there?
osho's reading ability
hugs and love to everybody., is there anything out there about techniques osho used concerning his reading abilities? any any even vague point towards anything? i need to get to howaman can read so many books. i understand there is subconscious and/or unconscious part of it but...? how? how that works? any ideas?
Hey there, what are your thoughts on the 1984 Rajneeshee bioterror attack?
The Wild Wild Country Sex Cult Documentary Is the Craziest Show on Netflix
'83 Bombing of Hotel Rajneesh--False Flag Attack??
So the mainstream media and the justice system blamedamember of an "militant, fundamentalist Muslim organization."
I haveatheory that it wasafalse flag attack by some secret agent of the government, but my friend thought it was probably actually bombs planted by Sheela to give her an excuse to arm the commune.
Thoughts? discussion? Does anyone have reason to belive muslims would come to Oregon to do this?